1 7 RUF TurboR Limited waxay leedahay saacad 135 kaliya saacad - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM 1 7 RUF TurboR Limited waxay leedahay saacad 135 keliya
1 7 RUF TurboR Limited waxay leedahay saacad 135 keliya
RUF waxay u egtahay in isha aan la aqoon sida guriga caadiga ah ee heshiisku uu ku daray taabasho dheeraad ah. Nooca bulshada Porsche's guddoomiyeyaasha guddoomiyeyaasha waxay hoos u eegi doonaan sidii ay ahayd xayaysiinta 90 Powerpoint oo ay ka buuxsamayso animation iyo Word Art oo ah hab dagaal badan.
Shirkadda Jarmalka ayaa si aad ah ugu fiicnaan lahayd aaggan, waxaanay ku dareysaa cabbirka cusub ee taxanahan ee Porsche 911 in si sharci ah loo tixgeliyo soo saaraha abaarta. Xaqiiqadan waxaa la siiyay 1981 isla markaana ugu dambeyntii, Mareykanka wuxuu u oggolaaday inuu ogolaado RUF si uu gawaaridiisa u geeyo Waqooyiga Ameerika. Shimbirta Yellow of John Lamm, of Wadada & socodka . The Yellow Bird wuxuu ahaa 930 Turbo, laakiin wuxuu tixgelinayaa mawjada caanka ah ee Ruf. Natiijada: baabuurka wax soo saarka ee ugu dhaqsaha badan aduunka. The Bird Yellow ayaa ahaa mid deg deg ah (xawaaraha ugu sareeya ee 213 km / h) in McLaren F1 kaliya ku guuleystay cinwaanka 1993.
Ma aha oo kaliya Birta Birta ah oo beddelaya TurboR Limited waxaa laga yaabaa mid ka mid ah Rufska ugu badan ee Rufs maanta. . Shirkadda ayaa marwalba iibsatay wareega jidhka ee Porsche halka ay joogaan "Body in White" ee warshadda. Marka la eego fudud, qolof dhisay qaab dhismeed, laakiin wax kale. Qaybta caddaanka ah ee cadaanka ah waxaa loola jeedaa astaanta lagu daboolay rinji.
Dhammaadka sanadaha 90, Ruf waxay iibsatay toddoba 993 Turbo bakhaarada kaliya dhamaadka wax soo saarka hawada 911 ee la soo dhaafay. Hagaajinta xirmooyinka ayaa ka baxsan fardaha 490 asal ahaantii la bixiyay iyo mishiinka 620 CV oo la siinayo iyada oo loo marayo mishiinka classic-ka Porsche. Marka la dhameeyo, mishiinnada hawo-qaboojiyaha ah ayaa ahaa kuwa ugu awoodda badan ee la soo saaro.
Tusaalaha lagu soo bandhigay halkan waa mid ka mid ah kiisaska wax soosaaraya ee soo saaraya todoba gawaarida, waana xaqiiqda ugu horeysa. Waxaa la geeyey milkiilaha koowaad iyo kan kaliya ee dhamaadka 2017 waxaana dhawaan lagu iibiyey 1 000 000 $.
La soco MSN Autos on Facebook et Twitter
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.msn.com/en-us/autos/enthusiasts/the-1-of-7-ruf-turbor-limited-has-just-135-miles-on-the-clock/ar-BBUpbe5
VPN - Badbaadinta iyo Xoojinta Ganacsigaaga lagula Dagaalamo Cybercrime
Qorshaha wanaagsan: Google Pixel 3 449 € halkii 759 €